Taxanaha ugu wanaagsan ee T9 Seddex waji soosaare soo saare boodhka HEPA iyo Warshad | Marcospa
Sharaxa taxanahan jumlada ah ee loo yaqaan 'T9 taxane' saddex waji oo ah soo-saare HEPA
Faahfaahin Gaaban: Mashiinka ayaa la qabsada matoorrada marawaxadaha faakiyuuga ah, nidaamka nadiifinta miiraha garaaca wadnaha si buuxda oo otomaatig ah.
Wuu shaqeyn karaa 24 saacadood oo isdaba-joog ah, wuxuuna quseeyaa qadar badan oo boodh ah, xajmiga cabirka yar yar ee shaqada.
Gaar ahaan waxa loo isticmaalaa wax shiida dabaqa iyo warshadaha wax safeeya.
Nidaamka Awoodda wuxuu la qabsadaa matoorka matoorrada faakuumka sare, danab ballaaran iyo laba jeer soo noqnoqda, kalsooni sarreysa, buuq yar, waqti dheer oo nolosha ah, wuxuu shaqeyn karaa 24 saacadood oo isdaba-joog ah.
Dhammaan waxa lagu qalabeeyaa qalabka elektarooniga ah ee Schneider, waxay leeyihiin culeys xad dhaaf ah, kuleyl, ilaalinta wareegga gaagaaban.
Bacda isku laabmeysa ee joogtada ah, rarka iyo dejinta si fudud oo deg deg ah.
PTFE filter HEPA dahaarka leh, khasaaro yar oo cadaadis, waxtarka filter sare.
Nidaamka nadiifinta garaaca wadnaha ee Jet-ka oo si otomaatig ah u qalabeysan, kuna qalabeysan kombaresare hawo ah, 24 saacadood oo aan kala go 'lahayn oo shaqeynaya, ayaa si fudud ugu habboon xaaladda shaqada ee kala duwan.
Halbeegyada taxanahan T9 Saddex waji HEPA soo saare boodh qiimo jaban
Noocyada taxanaha T9 iyo qeexitaannada
Danab 380V / 50Hz
Awood (kw) 5.5 7.5 5.5 7.5 5.5 7.5
Sawaxanka (dbA) 70 71 70 71 70 71
Nooca shaandhada HEPA filter &ldquo;TORAY&rdquo; polyester
Filter area(cm&sup3;) 30000 3X15000
Awoodda shaandhada 0.3&mu;m＞99.5%
Nadiifi shaandhada Nadiifinta miiraha garaaca wadnaha Nadiifinta mootada Garaaca wadnaha oo buuxa
Aragti (mm) 650X1080X1450 650X1080X1450 650X1080X1570
Miisaanka (kg) 169 173 172 176 185 210
Sawirrada taxanahan T9 taxane saddex waji ah warshad soo saarta boodhka HEPA
Hore: Taxane A8 Saddex waji faaruq ah oo warshad ah
Xiga: TS70 TES80 Seddex weji soo saare boodh ayaa lagu dhexgeliyey kala-sooca hore
F11 heer sare ah Single wajiga mid motor HEPA du ...
Tayo sare leh unugyada soo saarista boodhka warshadaha s ...